YC YL DZAKATEVEDZANA MOTORI - anoderedza, honye anodzora, honye magiya, mabhokisi epasi, magiya anomhanyisa, akasiyana, helical giya, sprial bevel magiya, ezvekurima magiya, matarakita magiya, marori magiya, honye gearbox
YC YL DZAKATEVEDZANA MOTORI
musha / motokari / YC YL DZAKATEVEDZANA MOTORI
YC yakateedzana inorema-basa imwechete-chikamu motors akakodzera kutyaira madiki michina uye pombi dzemvura, kunyanya kumhuri kana mashopu munongowanikwa imwechete-chikamu magetsi magetsi. Kuenderana ne "IEC" yakagadzirirwa nematekinoroji epamberi uye akagadzirwa kubva pane zvakanakisa zvigadzirwa, mota dzinotaridzika kutaridzika uye kuita kwakanaka.
YC akateedzana mota anove eP44, akavharirwa zvachose uye anotonhorera fan. Mota yeakaverengwa kuburitswa kwe3HP uye pazasi pane capacitor-yakatanga, painoshanda pasi yakatarwa voltage, pasi pe50Hz, ine torque yekutanga kusvika katatu nguva dzakatemwa toni uye pasi pe3Hz, torque inogona kuve 60 nguva iyo yakatarwa imwe. Mota dze2.75HP uye pamusoro ndedze capacitor kutanga uye kumhanya. Ivo vane zvakanakira yakakwira torque, yakadzikama kumhanya, yakaderera iyo mal kukwira, yakaderera ruzha uye yakanyanya kuwandisa kuita.
ZVESE ＆ KUISA DIMENESI
Kubhururuka Kukura (mm)
Zvakawanda Dimensions (mm)